Esi i toomi iPhone na PC gị Nzukọ Ekwentị
Esi i emomi iPhone na PC gị na mmemme ndị a dị mfe
Dị ka onye ọ bụla maraworị, iOS Ọ bụ sistemụ arụmọrụ nke Apple. Emepụtara ya ka emee ya na ngwaọrụ dịka iPhone, iPad na iPod Touch. Agbanyeghị, enwerekwa ike iji ya na ngwaọrụ ndị ọzọ, ọ bụrụhaala na anyị maara otu esi eme iomi iPhone na PC.
Ma anyị na-aga n'akụkụ. Nke mbu, ka anyi cheta ihe isi uru na iOS na-enye ndị ọrụ ya, ihe kpatara ya ji bụrụ usoro dị oke ọnụ ahịa gburugburu ụwa. Ihe ndị a na ihu ọma bụ, karịa ihe niile, ls nche na ịdị mfe nke iji, site na iji folda dị mfe. Anyị ga-ekwukwa arụmụka ndị ọzọ dịka Centerlọ Ọrụ Egwuregwu (ihe dị mkpa maka ndị na-egwu egwuregwu) ma ọ bụ ikike ya ịme ọtụtụ ihe na-enweghị emetụta arụmọrụ zuru ezu.
Best Free gam akporo Emulators maka MacOS
Ajụjụ bụ, gịnị na-eme mgbe mmadụ chọrọ ịnụ ụtọ elele nke iOS mana ọ nweghị ngwaọrụ kwesịrị ekwesị iji kwado ya? Enwere m ike iji ngwaọrụ ọzọ na-abụghị Apple?
Anyị na-eweta azịza ya na post a, ọ kachasị maka ndị ọrụ nke sistemụ arụmọrụ Windows, ndị na-abụghị n'efu bụ ndị otu kachasị n'ụwa. Ihe niile kwere omume ekele na ojiji nke inomi teknụzụ. Ekele ya, anyị ga-enwe ike igbu ndị iOS ngwa ọdịnala na Windows 7, 8 ma ọ bụ 10. Kpọmkwem dị ka a ga - asị na anyị na - eji ngwaọrụ Apple.
1 Gịnị bụ ihe atụ iOS?
2 The kacha mma iOS emulators maka PC
2.1 Igwe ikuku iPhone
3 Omi iPhone na PC: Mmechi
Gịnị bụ ihe atụ iOS?
Nke ahụ bụ ajụjụ mbụ a kọwara: gịnị bụ n'ezie ihe iOS emulator? Kedu ihe bụ echiche na otu esi arụ ọrụ, dịka ọmụmaatụ, na-e iPhoneomi iPhone na PC gburu?
Ihu ọma, ọ nwere ike kwuru na ihe iOS emulator bụ sọftụwia arụnyere na kọmputa Windows. Sọftụwia a na - enye gị ohere ịgba ọsọ sọọsọ sọọsọ maka iOS (egwuregwu gụnyere, n'ezie), na - ewepu nsogbu ọ bụla enwere ike ịdị na ndakọrịta ma ọ bụ igbu.
Ọ dị mkpa ọdịiche dị na iOS emulators na simulators dị mfe. Nke ikpeazụ, dị ka aha ya na-egosi, na-ejedebe ịmegharị ọrụ nke ngwa iOS na kọmputa, na-enweghị ohere ịwụnye ma jiri ya, na-eji ohere ya na ohere ya niile.
The kacha mma iOS emulators maka PC
Anyị na-enyocha ebe a ụfọdụ n'ime ndị kasị mma emulators ịrụ ọrụ a. Asaa na-akpali nhọrọ ịhọrọ site na:
Igwe ikuku iPhone
Aha ahụ na-ekwu ya niile. Igwe ikuku iPhone ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị zuru ezu emulators na anyị nwere ike nwewa ka. Na ya anyị nwere ike ịme ma nata oku, zipu ozi olu na, karịa ihe niile, budata ma wụnye ngwa iOS na egwuregwu kọmputa gị.
Isi ihe na-arụ ọrụ nke ngwa a bụ h
E mepụtara ya na Adobe iji emomie eserese eserese nke iPhone. Maka nke a, anyị ga-arụnye Adobe Ikuku na ngwaọrụ anyị. Ma ọ bụghị na ọ gaghị ekwe omume i toomi iPhone na PC site na iji Air Phone emulator.
Ọ bụ kpam kpam free na mfe na-eji ngwá ọrụ. Ọ na-dakọtara na Windows 7 / 8.1 / 10 na XP.
Budata njikọ: Igwe ikuku iPhone
Nke a bụ a ígwé ojii dabeere na iOS emulator. Nke a pụtara na ọ chọghị nbudata ngwanrọ ọ bụla ma ọ bụ nrụnye na kọmputa gị. Agụụ.io bụ ihe magburu onwe ngwá ọrụ i emomi iPhone on PC, a nnọọ uru iOS emulator maka Windows.
Na mgbakwunye na uru ndị ọzọ, sọftụwia a dị ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'efu. Kedu ihe "ọ fọrọ nke nta" pụtara? Anyị na-akọwara gị ya: nkeji 100 mbụ kwa ọnwa bụ n'efu. Ozugbo a gafere oke a, ị ga-akwụ ụgwọ mana obere, naanị mkpụrụ ego ole na ole ($ 0,05) kwa nkeji.
Ihe ama ama bu ihe nlere na ihe nchọgharị yana oru nkwado ndi ahia.
Budata njikọ: Agụụ.io
BlueStacks, a dị iche iche emulator, ma nnọọ uru
Ikekwe nke a bụ opekata mpe iOS emulator nke ndị a kpọtụrụ aha na ndepụta a. Agbanyeghị, ọ bụ ngwa ọrụ na-enye anyị ọtụtụ elele ma baa uru ị payinga ntị na ya. Iji malite, ọ bụ kpamkpam n'efu ma dị mfe iji. Na mgbakwunye, ọ na-enye onye ọrụ ọtụtụ nhọrọ na ntọala ma na-enye ohere ogo dị elu nke nhazi.
Ọ dị mma ịsị na ọ bụghị emulator iOS maka PC n'echiche siri ike nke okwu ahụ, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ na-enye anyị ohere iji ụfọdụ ngwa ndị naanị maka ekwentị mkpanaaka, ma ọ bụ maka gam akporo ma ọ bụ iOS. Ọ bụrụ na ebumnuche anyị bụ naanị nke ahụ, BlueStacks ọ bụ oke nhọrọ.
Budata njikọ: Okwute
iPadian: maka ọtụtụ, ndị kasị mma iOS emulator maka PC na ahịa
N'uche ọtụtụ ndị, iPadian es ihe kacha mma emulator iOS maka Windows 10 nke dị ugbu a, ọ bụ ezie na enwere ike iji ya na Linux na Mac OS X system. N'ezie, ọ na-eme ọtụtụ ihe karịa naanị iulateomi. The aha na-enye anyị a aidia: a ngwa bụ ike nke na-emepụtaghachi na ihuenyo nke iPad na kọmputa nnọọ ikwesị ntụkwasị obi. N'ezie, interface ahụ bụ otu ihe, gụnyere ndabere na akara ngosi. Iji tinye ma, naanị ihe ebe simulator a na-ada bụ na mbọ iji imitateomie usoro ihuenyo mmetụ.
Ihe nbudata iPadian tinyere otutu ngwa ọdịnala dị ka Twitter, Facebook, Instagram, YouTube na ndị ọzọ. Ihe ọzọ bụ, ọ na-etinyekwa ụlọ ahịa ngwa ahịa zuru ezu nke ị ga-esi nweta ngwa iOS niile na Windows.
Ekwesịrị ịsị na iPadian nwere ike ịbụ ndị kasị mma nhọrọ n'etiti iOS emulators maka egwuregwu Fans. Ọbụghị naanị n’ihi na ọ bụ ngwa ọrụ kachasị mma iji nwee ọ gamesụ n’egwuregwu emere maka iOS na kọmputa Windows, kamakwa n’ihi na ọ na-abịa na ọtụtụ egwuregwu ndị edoziri arụnyere.
La free version iPadian tinyere nnweta na Storelọ Ahịa App. N'aka nke ọzọ, ụdị akwụ ụgwọ na-enye ọtụtụ nhọrọ na arụmọrụ, dịka ngwa iOS maka WhatsApp ma ọ bụ Snapchat. Ma ọ bụghị nke ahụ dị oke ọnụ, naanị ị ga-akwụ $ 10.
Budata njikọ: iPadian
MobiOne: Onyonyo nke gburugburu ebe obibi n'oge usoro nwụnye
Emeputara ngwanrọ a ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 8 gara aga, ọ bụkwala ọtụtụ narị puku ndị ọrụ nọ na gburugburu ụwa ebudatara. Dị ka ngwa ndị ọzọ dị na ndepụta a, MobiOne Ọ na-enye anyị ohere i toomi iOS gburugburu ebe obibi na Windows PC ma si otú a nwee ike ịgba ọsọ ngwa iOS dị iche iche.
N'agbanyeghị na ọ bụghị ndị kasị oge a iOS emulator maka PC na ahịa, a na usoro-agụnye Atụmatụ pụrụ iche nke na-eme ya ihe na-atọ ụtọ. Ọmụmaatụ: ọ dakọtara na nsụgharị Windows niile, na-eji isi mmalite, nwee ike ịkwado nnukwu ngwa ma nwee ike ịhazi ma nwalee ngwa maka iPad. Na mgbakwunye, interface ya nwere ike ịhazi ya, yana enwere ike ịmepụta ntụgharị ntụgharị ma mejuputa arụmọrụ na ịdọrọ.
Budata njikọ: MobiOne
IOS emulator na PC Smartface
Ama ihe bụ ihe ọzọ nke softwares na-ekwe ka anyị i emomi iPhone na PC maka free. A na-ahụta ya dịka ngwa kachasị mma nke ụdị ya, nwee ike iulatingomi nsụgharị dị iche iche nke iPad na iPhone (iPad mini, iPhone 5, iPhone 6, wdg).
Ọ bụ ezie na ebubere ya na mbụ ka ndị mmepe na ndị mmemme jiri ya, ọ dịkwa mfe ịnweta maka ndị ọrụ nkịtị. N'ezie, ya interface dị mfe iji.
Otu n'ime isi ihe dị na ihu ọma (nke gosipụtara ọdịiche dị na ya na ndị ọzọ emulators) bụ ya ọrụ nkwado ọrụ, nke na-anọgide na-arụ ọrụ. Nke a bụ n'ihi na ngwa ahụ ka na-etolite ma tinyekwa arụmọrụ ọhụụ oge ọ bụla. N'etiti ọghọm ya, anyị ga-ekwupụta mkpa ọ dị ijikọ Smartphone gam akporo na PC anyị ka SmartFace rụọ ọrụ.
Budata njikọ: SmartFace
Xamarin: The kasị zuru ezu iOS emulator maka PC, kamakwa ndị kasị dị mgbagwoju anya
Agbanyeghi na edeziri ndetu a na mkpụrụedemede, ọ na-eme na anyị echekwala nke kachasị mma maka ikpeazụ. Xamarin bụ sọftụwia dị ike, echere maka ndị mmepe na ndị mmemme. Nke a pụtara na, n'ụkpụrụ, ọ gaghị adabara onye ọrụ ọ bụla, ebe ọ bụ na interface ya na ọrụ ya dịtụ mgbagwoju anya.
Mana ọ bụrụ na anyị nwere ihe ọmụma zuru oke, ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị ejiri oge na-enyocha ma na-aghọta etu Xamarin si arụ ọrụ, anyị ga-enwe emulator zuru oke n'aka anyị. a ọkachamara ngwá ọrụ. Na ya, na mgbakwunye na i emomi sistemụ arụmọrụ nke gam akporo mobile ngwaọrụ, anyị nwekwara ike ịzụlite ngwa anyị.
Budata njikọ: Xamarin
Omi iPhone na PC: Mmechi
Na mmemme anyị tụlere na ndepụta a, onye ọrụ ọ bụla nwere ike rụọ ọrụ na ngwa iOS na Windows PC gị. N'ụzọ dị otú a, ọ dịghị mkpa ịgbanwe akụrụngwa, naanị wụnye emulator ma ọ bụ emulators na ya wee si nweta ngwa Apple nke sitere na sistemụ Windows. Naanị na enweghị ụgwọ ndị ọzọ.
Yabụ kedu nke ịhọrọ? Nke ahụ ga-adabere na ihe ọmụma na mmasị nke ọ bụla. Anyị na-agba gị ume ka ị nwalee nke ọ bụla n’ime ha na maka onwe gị ịhọrọ nke ga-adabara gị na ihe ị na-achọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Sistemụ arụmọrụ » Esi i emomi iPhone na PC gị na mmemme ndị a dị mfe
Etu esi ehichapụ ozi na Facebook Messenger maka mmadụ niile
Etu esi gụọ koodu QR na PC yana ngwa ndị a n'efu